Ho fanolorana dia fifaliana lehibe ho ahy ny manoratra ary mametraka etoana amin'ny alalan'ity pejy ity ny tantara iray, mandika ihany koa ny mety ho fiainan'ireo ray aman-drenitsika rehetra tany aloha tany.
Atao ahoana moa. Fa mpanompo tsy mahasoa ihany ny tena ary tonga amin'ilay hoe te-ho tanora zokiny ve sa te-ho zandry antitra, kanefa tsy mendrika akory na dia hitsimpona izay latsaka amin'ny tsihy fisakafoananareo akory. Koa dia mametraka indrindra ny fialantsiny sahady amin'izay rehetra mety ho banga na koa diso voarakitra, kanefa tsy adidiko izaho samy irery fa adidiko miaraka aminao ny miezaka.
Kanefa nony tsy izany hoe faladia zato naharon'ny lalana isika mianakavy ka dia samy manana ny lalany, ary vary arivo atambatry ny sompitra, fa samy manana ny fotoany avy . Koa heveriko, fa tonga ary ny fotoana tokony hanolorako izao tantara tsotra dia tsotra izao. Mbola eo ampandalinana mafy aho ka betsaka ny tsy ho voatanisa ato. Eo am-pikarohana izany ny tenako miaraka amin'ireo rehetra afaka manampy ahy.
Eto dia manolotra fisaorana feno ny ray aman-dreny Andriamaroahina Albert (Dadabe) sy Andriamarovony Jean Ravoninjatovoson (Dadajaona), izay tena nanampy be dia be tokoa tamin'ny fanatontosana izao pejy anaty tranokalam-pifandraisana izao.
Ary dia manantena antsika rehetra koa izay manana hanampy izany mba hanoratra na hiresaka izany aminay mivantana.